eguqulwe ngokomgangatho ophezulu isikwere ityhubhu yomoya
eguqulwe ngokomgangatho ophezulu isikwere ityhubhu yomoya Iimbonakalo: 1. Ubunzima bokukhanya kunye namandla aphezulu 2. Ugqatso olugqwesileyo. 3. Ukuxhathisa ukuvela. 4. Ukucwangciswa okuhle 5. Bhetyebhetye kakhulu. 6. Inkangeleko entle. Imifanekiso yeMveliso: FAQ Q1.Mingaphi iminyaka kolu shishino? A: Sikhethekileyo...